Tolona Ho Amin’ny Fahamendrehana: Zon’ny Vehivavy Ao Afghanistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2018 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Ελληνικά, русский, Español, Italiano, polski, English
Sary Flickr. Fampiofanana momba ny sary fanao an-gazety ho an'ny vehivavy tao Farah City, Afghanistan Tovovavy Farahi mijery ny kamerà ao amin'ny tanànan'ny nampodiana an-tanindrazana sy ny mpitsoa-ponenana ao an-toerana, 9 Feb.
Satria niteraka adihevitra mafana momba ny fanorisorenana ara-nofo manerana izao tontolo izao ny hetsika #MeToo, ny ankamaroan'ireo vehivavy ao Afganistana dia navela hijery ny fiantraikany teo amin'ny sisin-dàlana. Niampy sy niara-dalana tamin'ny fiverenan-dalana mitampodi-fohy mandrakariva ny tombony azo tamin'ny zon'ny vehivavy ao amin'ny firenena tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Amin'izay fotoana izay, mbola mitady lalan-davitra dia lavitra ny fotoana mitovy karazana amin'ny # MeToo tompotany ao amin'ny repoblika iray tafiditra lalina amin'ny fandalàna ny nentim-paharazana ara-tsosialy sy ny asam-pahefana ara-politika mifampiaro.
Sambany raha nanatona ny faran'ny taona no nisy vehivavy telo no nahazo seza tao amin'ny filan-kevi-paritany Maidan Wardak, ao amin'izay tatatataina ho fandresena lehibe azon'ny vehivavy amin'ny fifidianana eny ifotony. Tany am-piandohan'ny taona, nampientanentana ireo mpanao fanentanana maro ny andrim-pirenena fanaovan-dalàna noho ny nandaniana lalàna iray iadiana amin'ny fanorisorenana. Saingy tamin'ny volana Desambra, io andry io ihany no nanilika vehivavy kandidà tokana ary nanaiky ireo lehilahy rehetra miisa 11 rehefa nanao fanendrena minisitra 12 ho ao amin'ny kabinetra ny filoha Ashraf Ghani.
Iray amin'ny tantaram-pahorian'ny vehivavy mampahonena indrindra tamin'ny herintaona ny iray volana mialoha ny volana novambra namonoan'i Zahra Khawari, tanora mpianatra iray tao amin'ny Oniversiten'i Kabul, tena rehefa notsipahin'ny mpanaramaso ny asany imbetsaka noho ny antony tsy mazava loatra ny fanohanana asakaroka nataony. Nanamafy ireo mpiray efitra fatoriana aminy fa sady niatrika fanavakavahana ara-poko izy no niatrika fanilikilihana noho ny maha-behivavy azy ihany koa nandritra ny fotoam-pianarany.
Manao izay hampalahelo ny kintan'ny pop, mahazo ny ratsy kokoa ny vehivavy miaramila
Indraindray no miseho andiany amin'ny kolontsaim-bahoaka, izay mahazo ako mihoatra manokana ny tolon'ny vehivavy.
Tamin'ny 20 aogositra 2017, nikarakara famoriam-bahoaka ny mpitondra fivavahana hanakanana an'i Aryana Sayeed, mpihira pop iray tsy hanao fampisehoana ao an-drenivohitra sady miampanga azy ho manolikoly ny tanora Afghan. Nokasain-dry zareo, fa tsy nahombiazana avy eo, ny hanakana an'i Sayeed noho ny fomba fisehony sy fomba fiakanjony, izay heverin-dry zareo ho mivaona amin'ny kolontsaim-pirenena sy kolontsaim-pivavahan-dry zareo.
Saingy misy ihany koa ny tranga iray hafa izay angamba manasongadina tsara ny mahazo ny vehivavy ao amin'ny firenena. Tamin'ny novambra 2017 nisy lahatsary iray lasa azon'ny rehetra ampiasaina nampiseho (kolonely) iray ao amin'ny Tafi-pirenen'i Afghanistan nanararaotra ara-nofo vehivavy iray nolazaina ho eo ambany fahefany.
Ho setrin'izany dia maro tamin'ireo tao amin'ny medis sosialy Afghan no vao maika nanome tsiny ilay niharam-boina, milaza ilay zatovovavy ho tsy manaja tena sy miampanga azy ho mitady fisondrotana amin'ny alalan'ny fanaovana firaisana ara-nofo. Misy aza ireo teoria amin'ny kianja ankavia nahazo vahana tao amin'ny media sosialy fa nisy mpifanandrina ara-politika amin'ilay (kolonely) tao ambadik'ilay zatovovavy.
Raha ifotorana avy amin'ny lahatsarin'ny kolonely Laghmani na ireo manamboninahitra afa ao amin'ny media sosialy, tena nanao ny asany tokoa ilay zavatra (nandray). Fa raha izany, dia tahaka ny nalain'olon-kafa ilay zazavavy hanao an'io na nanao izao zavatra izao noho ny sitrapony feno izy, fa tsy hoe noterena na ho takalon'ny fampakarana azy amin'ny asany.
Zo sy Fiarovana Voasongona
Fahendrena ifanarahana amin'ny ankapobeny no manolotra fa naneho fihemorana goavana teo amin'ny zon'ny vehivavy ny fitondran'ny Taliban nanomboka ny taona 1996 ka hatramin'ny taona 2001 ary nisy ny fandrosoana goavana momba izany rehefa niongana izy ireo.
Saingy raha nanao zavatra maro ho famalifaliana ny Tandrefana mpanohana azy ny governemanta post-Taliban tao Afghanistan — natokana ho an'ny vehivavy, araka ny lalampanorenan'ny firenena ny 25%-ny toerana ao amin'ny parlemanta, ohatra — dia mbola tsy sakaizan'ny vehivavy velively ny andrim-panjakana hafa, indrindra fa ny eo amin'ny fitandroana ny filaminana.
Tamin'ny septambra farany teo, ohatra, nitatitra ny Mpanara-Maso Manokana ny Fanorenana Indray an'i Afghanistan avy any Etazonia (SIGAR) fa misy ireo vehivavy mananontena sasantsasany maty tany an-tany fiadiana vadiny tao amin'ny Tafi-Pirenena Afghan noterena hanao firaisana ara-nofo amin'ny mpiasam-panjakana vao mahazo ny fisotroan-dronono efa natokana ho an'ireo fianakaviana nidonam-pahoriana. Io tatitra io no nahatonga ny fivoahan'ny lahatsary mampiseho an'i Laghmani sy ilay tanoravavy efa voalaza etsy ambony.
Nantenaina hiroso bebe kokoa ho fampiharana ny zon'ny vehivavy ny Filoha Ghani, amin'ny ampahany noho ny firesahan'ny vadiny Rulha Ghani matetika ity lohahevitra ity. Notezaina tamin'ny tara-kevitra vahiny (tandrefana) moa io vadiny io.
Na izany aza, nandritra ny kabary iray tamin'ny herintaona nikendrena hampahamenatra ireo mpifanandrina aminy ara-politika i Ghani no nilaza fa ” na iza na iza milaza fa misy olona ao amin'ny governemanta miara-miasa amin'ny ISIS dia tokony hiseho ary hanaporofo izany, fa raha tsy izany dia tokony hitafy Chadur [voalim-behivavy] izany olona izany.”
Nanompa an-karihary ny voalim-behivavy i Ashraf Ghani. Nompainy ny vehivavy rehetra manerana ny firenena. Hahazoany sy ny governemantany vahana ny fialany tsiny amin'ny vehivavy. Izany no kely indrindra azony atao.
Navoakan'i ‎جعفر رسولی Jafar Rasouly‎ tamin'ny Asabotsy 2 desambra 2017.
Tsy ela taorian'izany dia nanao fialan-tsiny tamin'ny ampahany tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny pejiny Facebook ny mpitondra-teniny, nefa mitazona ilay fanamarihana izay niteraka fifandisoan-kevitra ka nampisy fihisarany tamin'ny fandrosoana tontosa.
Saingy na dia lavitra ireo tia tanindrazana tafahoatra miteraka fankahalana ao amin'ny politika Afghan aza i Ghani, dia sariohatry ny tolona lavitra ezaka atrehin'ny vehivavy ao amin'ny firenena io teny diso io. Mbola lava sy lavitra ny lalana hitakiana ny zo sy ny fahamendrehan'ny vehivavy.